Pickup - China Changzhou Wujin Hengfa Machine
Izingxenye ezisele for Isiyingi kusondela
Izingxenye ezisele for nakuWinder
ISEMBOZO OF Shuttle Pusher
Izingxenye ezisele for ezahlukene China amazwe itheyiphu extruding imigqa kusondela isiyingi.
Imikhiqizo enikeziwe: Imishini izingxenye zonke izinhlobo Plastic uhlaka lokweluka indwangu isiyingi, Tape esisuka umugqa, Iribhoni isikhonkwane sohlaka lokweluka izikhwama Jumbo njll Singabantu ophambili izingxenye umphakeli ephezulu izimpahla engabizi.
1, Ukukhiqizwa nge control ikhwalithi mpahla usuku ukulawula
2. Eyinkulungwane uhlaka lokweluka indwangu nakuWinder izingxenye, big ubuningi okukhipha, ukulawula izindleko.
3. Sisabalalisa izingxenye cishe bonke China kuwusongo nakuWinder izimboni, sinolwazi oluningi ngokwanele elayinini isikhonkwane sohlaka lokweluka itheyiphu ngilulekela. Futhi kalula ukukhiqiza izingxenye ngezifiso.
Noma yisiphi isicelo, sicela neze awa manqikanqika ukuzama ningithinte.
Previous: Ukufakwa Pipe
Big Bag Isiyingi uhlaka lokweluka
Isiyingi uhlaka lokweluka Ingxenye elingasebenzi
Isiyingi uhlaka lokweluka Wire Cutting Machine
kusondela Isiyingi izingxenye elingasebenzi
Isiyingi Ukwaluka Tube uhlaka lokweluka
Hlunga Mesh Ukuze Isiyingi uhlaka lokweluka
Heddle Belt Ukuze Isiyingi uhlaka lokweluka
High Speed Isiyingi kusondela
Jumbo Bag Isiyingi uhlaka lokweluka izingxenye
Jumbo Bag Isiyingi Ukwaluka uhlaka lokweluka
Leno Isiyingi uhlaka lokweluka izingxenye
Mesh Bag Isiyingi uhlaka lokweluka izingxenye
izingxenye Ukuze Starlinger Isiyingi uhlaka lokweluka
plastic Isiyingi uhlaka lokweluka Machine
Plastic Isiyingi kusondela
plastic Isiyingi Machine
Kk Nokwelukiweyo Bag Isiyingi kusondela
Kk Nokwelukiweyo Bag Ukwaluka Isiyingi uhlaka lokweluka
Kk Nokwelukiweyo Sack Isiyingi uhlaka lokweluka
Ingxenye elingasebenzi Of Isiyingi uhlaka lokweluka
Weft Ukuphela inzwa Ukuze Isiyingi uhlaka lokweluka
Nokwelukiweyo Bag Isiyingi uhlaka lokweluka izingxenye
Nokwelukiweyo Bag Isiyingi Ukwaluka uhlaka lokweluka
Small Guide Frame
Ikheli: Zhaiqiao Imboni Park, Changzhou, Jiangsu, China
Ifeksi: + 86-519-86268228